Shirkadda Isgaarsiinta Golis Telecom oo ku caan baxdey adeeg isgaarsiineed oo casri ah, waxay u haysaa macaamiisheeda sharafta leh iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed adeegyo isgaarsiineed oo la jaanqaadaya horumarka dunida ee dhanka Technology-da.
Golis Telecom oo ah horyaalka Isgaarsiinte geyigeenna waxay soo bandhigtey adeegyo cusub iyo waliba war farxad leh oo ku aadan qiimo dhimistii ugu balaarneyd ee ay abid sameyso waxaana ka mid ah
Adeegan wuxuu kuu sahlayaa inaad u doorto dadka kusoo wacaya ama telefoonkaaga soo waca cod ay maqlaan inta uu Telefoonku u dhacayo sida, Qur’aan, Nashiidooyin, Xadiisyo iyo suugaan kala duwan sida, Gabayo, Geeraaro, iyo buraanbur.
Adeegan wuxuu suurtagal ka dhigayaa in codka aad doorato uu maqli doona qofka kusoo waca iyadoo codka caanka ah ee marku ay Telefoonadu dhacayaan la maqlo uu bedeli doono hadba codkii aad doorato ee kor ku xusan.
Adeega Suubiska Golis:
Adeegan ma ahan mid cusub waa adeeg horey ay shirkadda Golis macaamiisheeda ugu fududaysay, wuxuu khuseeya ku shubashada daqiiqadaha hadalka, waxaana qofkii lacag ku shubtaa uu helayaa 10% oo free ah.
Qiima dhimista ay soo bandhigtey shirkadda Golis Telecom Somalia waa tii ugu balaarneyd ee shirkad Isgaarsiineed oo ka dhisan Bariga Afrika ay soo bandhigto waxaana ka mid ah
Hadii aad ku shubato hal doolar waxaad shan daqiiqo kula hadli kartaa wadamada Carabta sida Imaaraadka Carabta, Yemen, Saudi Arabia, Syria, Oman, Qatar, Kuwait,Bahrain,Egypt & Ciraaq.
Qiimaha halkii daqiiqo lagu wacayo dhamaan dalalkan waxay shirkaddu ka dhigtay $ 0.20 USD.
Shirkada Golis oo waligeed ku hawlneyd adeega shacabka Soomaaliyeed iyadoo ka ambaqaadaysa xiriirka dhanka ganacsi iyo waxbarasho ee wadamada Aasiya la leeyihiin deegaanada Soomaalida waxay qiimo dhimis xoogan ku sameysay qiimaha lagu waco shan wadan oo ka mid ah kuwa inta badan ay wacaan dadka Soomaaliyeed, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Hindiya, Pakistan, Thailand, Malaysia & Shiinaha.
Dalalkan oo ay ku dhaqan yihiin ardey badan oo Soomaali ah waliba ganacsato qiimaha halkii daqiiqo aad ku wici karto waa $ 0.10 USD oo u dhiganta 2 kun oo shilin Soomaali ah.
Macnuhu waa hadii aad ku shubato 1 doolar waxaad wadamadaasi kula hadli kartaa 10 daqiiqo.
Qiimaha lagu waco dalalka Yurub ayay shirkadu qiima dhimis ku sameysay, waxana hal doolar aad kula hadli kartaa qof Yurub jooga mudo shan daqiiqo ah.
Dadka had iyo goor ku xiran wadamada Waqooyiga Ameerika sida Mareykanka iyo Canada ayaa fursadan si weyn uga faa’ideysanaya waxaana halkii doolar aad kula hadli kartaa qofkii jooga wadamadaasi mudo 15 daqiiqo ah.
Qiimo dhimistu dalalka dibada oo kaliya ma ahan, sidoo kale shirkada Golis waxay jabisay qiimaha lagu waco gobolada dalka sida Koonfurta iyo Soomaaliya iyadoo laga dhigay in halkii daqiiqo dalka gudihiisa aad ku wici karto $ 0.05 USD oo u dhiganta kun shilin Soomaali ah.
Balanteennu waa adeega casriga ee Golis Telecom Somalia
@2012 (Ku Laabo Bogga Hore)